यौन चाहना भए नभएको कसरी थाहा पाउने ? | यौन चाहना भए नभएको कसरी थाहा पाउने ? – हिपमत
यौन चाहना भए नभएको कसरी थाहा पाउने ?
काठमाण्डौं ,१९ माघ:सामान्यत महिलाहरु पूरुषको दाँजोमा यौंन सम्पर्क गर्न चाहाना भएपनि व्यक्त गर्न वा बोलेर भन्न सक्दैनन् । यसर्थ यहाँ महिलाहरुमा यौन चाहना भएको कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा गरिन्छ ।